के पेट्रोलियम पदार्थको कालोबजारीमा आन्दोलनकारी र सरकारको सहयोग छ ? | Jukson
के पेट्रोलियम पदार्थको कालोबजारीमा आन्दोलनकारी र सरकारको सहयोग छ ?
काठमाडौं– भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि पेट्रोलियम पदार्थमा कालोबजारी मौलाएको छ । यस्तो कालोबजारीलाई आन्दोलनकारीदेखि सरकारसम्मकै सहयोग रहेको छ ।
राजधानीसहित देशभरका पेट्रोल पम्पहरूमा इन्धन नपाइए पनि सो आसपासकै क्षेत्रबाट भने बढी मूल्य तिरेर जति पनि इन्धन पाइने अवस्था छ । इन्धन अभाव भए पनि काठमाडौंका सडकमा देखिने सवारी–साधनको चापले कालोबजारी मौलाएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
चर्को मूल्य तिरेर जति पनि पेट्रोलियम पदार्थ पाइने तर पम्पमा भने चार दिन लाइन बसेर पनि नपाइने अवस्था आएसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यस विषयमा गम्भीर चासो दिएको छ ।
अख्तियारले आइतबार सरकारी निकायका प्रमुखलाई तत्काल कालोबजारी रोक्न निर्देशन दिँदै कालोबजारी नरोकिए कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको थियो । अख्तियार प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करले वाणिज्य विभागका महानिर्देशक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गृह, आयल निगमलगायत कार्यालयका प्रवक्ता, काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै प्रशासन एवं सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू उपस्थित कार्यक्रममा चौतर्फी कालोबजारी मौलाउँदा पनि सरकारी निकाय प्रभावहीन देखिएको भन्दै कारबाहीको चेतावनी दिएका हुन् ।
उनले भनेका थिए, ‘तपाईंहरू गौशाला, कोटेश्वर र कलंकी चोकमा पुगेर हेर्दा हुन्छ, गाडीहरूको जाम छ, सरकारले उपभोक्तालाई ग्यास र मट्टीतेल पुर्याउन सकेको छैन, पाँच सय रुपैयाँमा सहजै पेट्रोल पाइन्छ । यो कसरी सम्भव भयो ?’
यसरी बढ्यो कालोबजारी
भारतले नाकाबन्दी गरेको हल्लासँगै एकाएक राजधानीका पेट्रोलपम्पले इन्धन नभएको सूचना टाँस गरेका थिए । सोलगत्तै पम्प आसपासबाटै इन्धनको कालोबजारी सुरु भएको उपभोक्ताको दाबी छ ।
पछिल्लो समय कालोबजारी इन्धनको चरम अभाव भएपछि तस्करहरू यही पेसामा सक्रिय भएको स्रोतको दाबी छ । तस्करहरूले भारतीय सीमा क्षेत्रसम्मै पुगेर इन्धन ल्याई बढी मूल्यमा बेच्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ । यसो त सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तथा तराई आन्दोलनको प्रभाव परेका स्थानका अधिकांश युवा नै सो कालोबजारीमा संलग्न छन् । यसैबीच उपभोक्ताले पम्पहरूमा लामो लाइन बस्दा समेत पेट्रोलियम पदार्थ नपाउने गरेको अवस्थामा केही तस्कर भने रात्रिबसमार्फत भारतीय सीमा बजारबाट इन्धन ल्याएर कालोबजारी गर्न सक्रिय रहेको समेत रातोपाटीले यसअघि नै खुलासा गरिसकेको छ ।
तस्करहरूले अहिले रात्रिबसहरू भाडामा लिएर त्यसमा पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने गरेका छन् । रोचक त के छ भने बसमा यात्रु हुँदैनन् । हुन्छन् त केबल डिजेल र पेट्रोलका ग्यालिनहरू । स्रोतका अनुसार भाडाका सो बसबाट एक लटमा तीन हजार लिटरसम्म पेट्रोलियम पदार्थ ल्याएर तस्करहरूद्वारा चर्को मूल्यमा बेचिन्छ । यसरी तेल बेचेर तस्करहरूले एक टिपमा पाँच लाखसम्म कमाउने गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
‘प्यारेन्जर बोक्दा राम्रो कमाई नहुने भएपछि चर्चित अग्नि, मितेरीलगायत कम्पनीको बस प्रयोग गरी तेलको तस्करी हुने गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
मधेसी मोर्चासम्मको कनेक्सन
तस्करहरूले आन्दोलनग्रस्त मधेसी भू–भाग छिचोल्दै सहजै हजारौं लिटर पेट्रोलियम पदार्थ राजधानीसम्म ल्याउने गरेका छन् । आखिर कसरी हुन्छ त सम्भव ? जानकारका अनुसार नाकामा दिनरात धर्ना र यातायातमा अवरोध हुँदा पनि ठूलो परिमाणमा अवैध इन्धन उपभोक्तासम्म पुग्न सामान्य अवस्थामा सम्भव हुँदैन ।
सोका लागि आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेताको सहयोगबिना सम्भव हुँदैन । यतिमात्रै होइन, राजधानीसम्म आइपुग्न प्रहरीका विभिन्न चेकिङ समेत पार गर्नुपर्छ । सानो झोलामा भएको सामानसमेत खोतली हेर्ने प्रहरीबाट ठूलो परिमाणको अवैध इन्धन कसरी छुट्यो ? स्रोतका अनुसार तस्करहरूले आन्दोलनरत मधेसी मोर्चादेखि सुरक्षा निकायसम्मको सेटिङ मिलाएका छन् ।
आइतबार अख्तियार प्रवक्ताले कालोबजारी नियन्त्रण नभए सरकारी निकायलाई नै कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुले पनि यसमा थप बल पुगेको छ ।
नीतिगत कालोबजारीलाई प्रश्रय
इन्धनको चरम कालोबजारी भइरहेका बेला सरकारी निकायबाटै कालोबजारीलाई प्रश्रय दिने खालको काम भएको छ । उपत्यकामा निजी प्रयोजनका लागि बाहिरबाट इन्धन ल्याउन चाहनेले ५० लिटरमात्रै ल्याउन पाउने बताउँदै प्रहरीले सोभन्दा बढी परिमाणको पाइए कारबाही गर्ने बताएको छ ।
आइतबार अख्तियार आयोगमा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न रात्रिबस आदिमार्फत उपत्यकामा भित्रिरहेको इन्धनबारे सरकारी नीति प्रस्ट्याउने क्रममा एक प्रहरी अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । यद्यपि त्यसरी ल्याइएको तेल बिक्री गरेको पाइएमा कारबाही हुने प्रहरीको भनाइ छ । यसरी निजी प्रयोजनका लागि खुलेआम तेल ल्याउन दिने अनि कालोबजारी गरे चाहिँ कारबाही गर्ने भन्ने दोहोरो नीतिले नीतिगत कालोबजारीलाई सरकारी निकायबाटै प्रश्रय दिइएको कतिपयको बुझाइ छ ।
ऐश्वर्या जस्तै देखिने स्नेहा अझै सलमानको सम्पर्कमा
‘छक्का पञ्जा फेरि’ मा धुर्मुस सुन्तली सहभागीत नहुने